Mofon-dronono - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
vahoaka80 minitraOlona 15
Ny zanako vavimatoa dia nilaza tamiko nandritra ny roa andro fa te-hanao "lamesa". Tiany ny manao zavatra any an-dakozia amin'ny tànany na amin'ny paingotra mihodina.
Ny andro talohan'ny nahavitanay ny ronono fanosotra, kakaô, hazelnut sy siramamy, ka rehefa avy nisakafo izahay telo dia nanomboka niasa. Toa hevitra tsara ny manaova mofo ronono, satria tian'izy ireo izany misakafo tsakitsaky Ireto horonan-taratasy ireto miaraka amin'i Nocilla® ary amin'ity indray mitoraka ity dia hanana tsakitsaky izy ireo nefa ireo zavatra roa noforonin'izy ireo.
Toy ny amin'ny fomba fahandro hafa mofo misy Thermomix, ity mofo ronono ity dia tena tsotra sy mora atao. Mila miandry fotsiny ianao hoe hitombo avo roa heny ny volan'izy ireo ary tokony ho raisina izany fotoana izany raha hataonay misakafo kely izy ireo.
Afaka manao mofo ronono amin'ny a habe kely na ataovy anaty lasitra mofomamy plum.
Rehefa mangatsiaka aho dia nitazona azy ireo tao anaty kitapo mba hivaingana, nakatona mafy, sns tonga lafatra izy ireo andro vitsivitsy.
Miaraka amin'io vola io dia mivoaka ny mofo ronono misy kilao 1 na manodidina Horonana 15, na dia miankina amin'ny haben'ny hataontsika aza izany.
1 Mofo ronono
Horonana malefaka ho an'ny tsakitsaky na hanomanana sakafo maraina tsy hay hadinoina.
Fotoana fiomanana: 1h 15M
Ronono 250 g
30 g ny masirasira an'ny mpanao mofo vaovao na vovo-masirasira mpanao mofo 2 sachet
450-500 g ny lafarinina mofo
Apetrakay ao anaty vera ny ronono, dibera ary siramamy. Izahay dia manao fandaharana 2 minitra, mari-pana 37º ary hafainganam-pandeha 2.
Izahay dia manampy ny masirasira sy ny programa 5 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Ampio ny lafarinina sy ny sotrokely sira. Afangaro mandritra ny 15 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 6. Manaraka, mandahatra izahay 3 minitra, vera nikatona ary haingam-pandeha.
Omenay ny endrika tadiavinay ny koba (mofo, randrana, mofo plum, sns.)
Manapaka kely ny tapany ambony izahay ary sasao amin'ny ronono kely.
Apetrantsika amin'ny toerana mafana tsy misy drafitra izy ireo ary avelantsika hitombo avo roa heny ny habeny.
Avelako ao anaty lafaoro izy ireo ary afaka adiny 1 dia vonona matetika izy ireo.
Apetrakay ao anaty lafaoro ny mofo ary avelao izy ireo hahandro mandritra ny 15 ka hatramin'ny 30 minitra.
Miankina amin'ny endrika ahitantsika azy dia handany fotoana bebe kokoa na kely isika, izany hoe raha horonana izy ireo dia ampy 15 minitra ary raha ataontsika mofomamy plum dia mila 30 minitra eo ho eo.
Minitra vitsy alohan'ny hamoahana azy ireo avy ao anaty lafaoro dia kosehintsika amin'ny ronono na siropaso maivana indray izy ireo.
Esory ary avelao izy ireo hangatsiaka amin'ny talantalana.
Azontsika atao ny mameno azy ireo miaraka amin'ny mamy sy masira.
Fanazavana fanampiny - Ronono, ronono, hazelnot ary siramamy / Ampahany sy mofo
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Arina sy mofo, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Arina sy mofo » Mofo ronono
Salama! Tiako ilay fomba fahandro, tsara tarehy ireo horonana ...
Ahoana ny fanamboarana mofo iray ary hampiasana azy io hanamboarana ny fomba fahandroanao ny mofo frantsay?
Tiako ny bilaoginao, misaotra betsaka!
Salama Irene, heveriko fa mofo malefaka loatra ny handemana azy avy eo. Mieritreritra aho fa ho tapaka izany. Miarahaba ary faly aho fa tianao izany.
M.Pilar dia hoy izy:
Recipe mahafinaritra !! Izaho dia tampony sy lehibe !! Misaotra betsaka amin'ny recette ???
Valiny tamin'i M.Pilar
Raha ny amin'ny fahitan'ny zanako lahy ny mofo ronono dia nilaza tamiko indray izy fa efa ela aho no tsy nanao an'io, saingy tanora loatra, azoko amin'ity tolakandro ity, tiako ny bilaoginao, arahabaina ………. FIARAHAM-PANAHY… .. tomlls
Misaotra betsaka, Mari Carmen!. Mirary ny soa indrindra.
Ahoana ny harena !! Fanontaniana iray: azo ampiharina amin'ny fametahana azy ireo ao anaty lafaoro amin'ny 50º ve ny tetika hanafohezana ny fotoana maharitra avo roa heny toy ny amin'ny koba hafa na mety handoto azy ireo eto? Misaotra betsaka, faly nanao ny resinao tahaka ny mahazatra.
Salama Teresa, ny marina dia mbola tsy nanandrana azy toy izany aho, saingy mieritreritra aho fa afaka mijery tsara. Raha manandrana ianao dia lazao amiko ny endriny. Mirary ny soa indrindra.
tsara !! Soso-kevitra iray raha avelanao aho, ao amin'ny mercadona dia mivarotra sôkôla vitsivitsy izy ireo, alohan'ny hametrahana azy ireo ao anaty lafaoro, apetrako miaraka amin'ireo koba ireo lafika ireo, ataoko boribory izy ireo ary tsy dia lehibe loatra, dia tsara (karazana doowap) ho an'ny zanako. tian'izy ireo
Salama Yolanda, ataoko miaraka amin'ireo koba brioche ireo ny mofo ary tianay izy ireo. Handefa ny fomba fahandro amin'ny bilaogy tsy ho ela isika. Mirary ny soa indrindra.
Salama, iray monja ny fiakaran'ny koba ???.
Tsy mila manainga aloha ve aho dia omeko ilay endrika hanainga fanindroany ???
Amin'ity tranga ity, eny, avelantsika hiakatra indray mandeha monja izy io. Fa raha manam-potoana ianao, manaova fiakarana roa araka ny voalazanao, aloha amin'ny koba vao vita vao avy eo aorian'ny ilay noforonina. Na dia masirasira kely aza no napetrako 😉
Salama Yolanda, tiako ahodin-dry zareo araka ny nolazainao, fantatrao bebe kokoa ve ny lanjan'ny koba hanaovana ny baolina sa ataonao maso azy?
Misaotra anao :)))
Salama! Te-hanao ireo muffin ronono ireo aho izay tena tsara fa manana fanontaniana aho: rehefa miteny ianao hoe "fonosana masirasira roa fonosana roa fonosana" dia ny fonosana masirasira Royal no resahina ao?
Valiny tamin'i Angelines
Salama Angelines, tsy an'ny Royal izy ireo. Ireo ampiasaiko dia avy amin'ny marika Maicena ary ilay boaty dia manao hoe "Baker's Yeast" (5 sachets come). Mirary ny soa indrindra.
IZAY GOODSSSSSSSSS ANAO dia alao sary an-tsaina ny azy ireo miaraka amin'ny NOCILLA RICOS RICOS
Valiny amin'i JUANI
Maria Jose. dia hoy izy:
Vao avy nisoratra anarana tamin'ny bilaogy aho fa nanomboka teo dia nankafiziko ny resipeo tsirairay. Te hiarahaba anao amin'ny asanao aho.
Ny fomba fahandro anio tsy nampiharina nandritra ny zato taona. Ianao no homena tsiny rahampitso rehefa latsaka alohan'ny horonana….
Tsara faran'ny herinandro,
Valiny tamin'i María José.
Tongasoa eto María José !. Faly be aho fa tianao ny bilaoginay. Miarahaba anao ary mirary faran'ny herinandro anao koa.
Endrey ny matsiro, nataoko tamin'ny endrika randrana, taloha, tonga tao amin'ny magazine thermomx ary tianay izany! Amin'ny manaraka dia hataoko ankizy kely toa mahafinaritra kokoa izy ireo !!! Ilay nokira matsiro eh ???
Tena matsiro izy, Piluka ary betsaka kokoa ny "nokilla". Mirary ny soa indrindra.
Indray mandeha aho nanao mofo ronono (tsy tadidiko raha ity fomba fahandro ity) ary nifikitra be ny koba (sarotra zakaina). Azo tanterahina ve ny anao? Mety hiala amin'ny vera sy amin'ny tanana ve izy io?
Misaotra betsaka toy ny mahazatra, zazavavy !!
Salama Silvia, miraikitra kely izy fa mitantana tsara. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Salama, manao ahoana ianao, inona ny hosodokoo amin'ny thermo t21 ny dingana dia mitovy ihany misaotra
Salama Sandra, miaraka amin'ny Th21 dia mitovy ihany. Mirary ny soa indrindra.
Salama zazavavy, omaly no nanomanako azy ireo hisakafo maraina ary tsy azonareo an-tsaina ny fahombiazana nananan'izy ireo tamin'ireo ankizy. Tiako ny mahita ny fahafinaretan'izy ireo mihinana zavatra noforoniko! Oroka fisaorana toy ny mahazatra
Faly be aho, Marién!.
Inona no zavatra manankarena indrindra ho an'ny mofo, na dia tsy maintsy nataoko tamin'ny endrika bun lehibe aza satria nifikitra be ny koba nefa matsiro ny tsiro, mampatsiahy ahy ny mofo vitsivitsy izay nividianan'ny reniko ahy tamin'izaho mbola kely ,, ,, ahhh ary miarahaba anao tsara ianao tiako tiako ianao araho ianao
Misaotra betsaka, Rocío!. Faly aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
Salama ry zalahy, rahampitso tsy an-kanavaka dia homaniko hohanina kely ity mofo ity, raha ny fisalasalako, mijanona toy ny an'ny "bimbo" ve ny mofo sa ny crust dia toy ny mofo fahagagana? Te hanontany anao aho raha manana fomba fahandro amin'ny roquillas ianao. Misaotra betsaka, tiako ny bilaoginao.
Salama Conchi, somary mafy noho ny banto ilay izy. Ho hitanao ny maha matsiro azy. Vetivety dia manantena aho fa ho afaka mametraka ny fomba fahandro ho an'ny donat. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay. Faly be aho fa tianao ny bilaoginay!
Ataoko izy ireo satria manana tmx aho roa taona lasa izay isan-kerinandro hanina kely any an-dakilasy ary mazava ho azy fa mivoaka tsara izy ireo ary mitazona "vaovao" be dia be.
Nataoko fantsona 2 izy ireo matsiro sy misaotra tovovavy
Faly aho fa tianao izy ireo, Mary!
ALICI dia hoy izy:
Salama zazavavy, misaotra noho ny manazava ny sakafoko! Te hanontany anao aho raha azo atao amin'ny ronono semi-skim ny fomba fahandro.
Valiny amin'i ALICI
Eny, Alici, azonao atao ny mampiasa ronono semi-skimmed. Miarahaba ary faly aho fa tianao ny bilaoginay.
Raha tiako haharitra andro vitsivitsy izy ireo, ahoana no hitahirizako azy ireo, ao anaty harona plastika na fonosana plastika?
Salama Silvia, napetrako tao anaty harona plastika izy ireo, ampiasaiko ny hatsiaka mba hivaingana. Mirary ny soa indrindra.
Nataoko omaly ny mofo ronono ary tianay efatra izahay, fahombiazana lehibe. Nampahatsiahy ahy betsaka ny sasakalin'ny fanaon'ny renibeko izany taloha, satria somary boribory ry zareo ary tsy dia tsikaritra loatra ireo fanapahana. Mba hanandramana dia nasiako siramamy tamin'ny roa mofo ary toa ny "monas", bun mahazatra any Murcia, azoko an-tsaina izany koa any amin'ny toerana hafa.
Faly aho fa tianao izany, Begoña!. Miaraka amin'ny siramamy eo amboniny dia matsiro. Mirary ny soa indrindra.
Tsara izy io ary mora be ny manao azy. Amin'ny manaraka dia hataoko ao anaty muffins ianao nanomboka tamin'ity indray mitoraka ity, tamin'ny volom-boaloboka no nanaovako azy. Muxas misaotra tamin'ny resinao.
Faly aho fa tianao izany, Elo! Mirary ny soa indrindra.
Scheherazade dia hoy izy:
Vao avy nanao an'io aho dia avy eo nandrahoina, antenaiko fa aleon'ny zanako kely ary hataoko matetika kokoa! Misaotra anao nizara taminay ity fotoana ity!
Mamaly an'i Scheherezade
Misaotra betsaka anao nahita anay, Scheherezade! Manantena aho fa ho tian'ilay kely. Mirary ny soa indrindra.
Manana fanontaniana momba ny fomba fahandro aho. Raha atsofontsika ao anaty lafaoro ny koba, esorintsika ve izy io rehefa mafana, sa avela ao anatiny?
Misaotra 😀 hataoko rahampitso izy ireo !!
Tsy maintsy avoakao Meliade. Manantena aho fa tianao izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Fisalasalana iray… rehefa nesoriko ireo horonan-taratasy taorian'ny fitsaharana sy hanafanana ny lafaoro, nidina izy ireo ary very ny volony… .. normal ve izany ????
Tsia, tsy tokony hitranga aminao izany. Ny hevitro dia ny nanaovan'izy ireo izany fiakarana faharoa lava loatra sy / na maripana be loatra izany. Zava-dehibe ny "hamindrana" azy ireo am-pitandremana.
Ahoana no nampety azy ireo?
Tsara toa izay rehetra avoakao amin'ny tranokalanao. Ataoko amin'ny ankizy izany ary avelako izy ireo hanao ny baolina "buns" rehefa miantso azy ireo izy ireo. Avy eo izy ireo mijery azy mitombo ao anaty lafaoro ary tian'izy ireo ny majika. MANKASITRAKA, MISAOTRA, misaotra
Faly aho fa tianao izany, Yosune! Misaotra betsaka anao nahita anay.
Endrey ny matsiro, ny zana-drahalahiko dia azo antoka fa hihinana izany miaraka amin'ny nokilla.
Valiny amin'i CRISTINA
Azo antoka izany, Cristi. Tian'izy ireo ny mofo mofo misy ronono miaraka amin'ny nolilla ary raha ataoko izy ireo dia manandrana maka eran-eran'ny sotrokely nokilla, nify mamy re izany!
Salama, ny zavatra voalohany milaza fa tiako ny forum anao, fanampiana be ianao. Fa…. Mikasika ireo muffins ronono dia narahiko tsikelikely ny resinao ary tena mafy izy ireo ... tsy haiko na izay no vokany na tsy maintsy manandrana indray aho!
Salama María Luisa, raha mafy izy ireo, dia satria tao anaty lafaoro be loatra izy ireo. Efa fantatrao fa samy hafa ny lafaoro tsirairay ary mino aho fa haingana kokoa no anaovana azy ireo. Andramo indray mba hahitana ny fomba fiasany. Mirary ny soa indrindra.
MARI LUZ dia hoy izy:
Salama, nanapa-kevitra ny hanao ny mofo ronono aho ary ny tena marina dia matsiro. Nanamboatra azy io aho tamin'ny fanaovana muffins kely ho an'ny zana-drahalahiko, saingy tamin'ny fotoana nijanonana dia tsy nampitombo ny habeny izy ireo. Nanaraka ny dingana rehetra aho ary namela azy ireo hipetraka mandritra ny 2 ora. Inona no tsy nety nataoko ?. Miarahaba anao roa, manampy betsaka ao an-dakozia ianao.
Valio amin'i MARI LUZ
Salama Mari Luz, na dia tsy ampitomboin'izy ireo aza ny volany, nitombo kely ve izany? Raha izany dia ampy izay. Miankina amin'ny maripana manodidina azy io. Mirary ny soa indrindra.
Miverina aho hanome anao hevitra hafa momba an'ity recette ity, fa tsy nanao horonana, dia namboariko tamin'ny lasitra karazana mofomamy, mba hisy zavatra mitovy amin'ny mofo voadidy hivoaka.
Manankarena, manankarena, manaitra. Toa ahy fa ankoatry ny mofo saika mahazatra dia tsy maintsy manamboatra mofo ho an'ny sandwich ihany koa aho izao! Misaotra anao hatrany.
Misaotra betsaka anao nahita anay, Marién! Izaho koa dia manao mofo ronono betsaka ho an'ny zazavavy ary tiako izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Izay no izy, apetrako ao anaty lafaoro ny muffin miandry azy ireo hitombo! Amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara ny zava-drehetra, ao anatin'ny adiny 1 na mihoatra no hanendasantsika azy ireo ... raha ny fanazavana, ao anaty vata fampangatsiahana ny "nocilla" miandry antsika hamoaka azy amin'ny sakafom-pisakafoanana anio folakandro. Mampandeha ny vavako !! Misaotra anao
Fanontaniana iray rehefa miteny ianao fa afaka miborosy amin'ny farany amin'ny siropaso maivana isika, ahoana no fomba anaovako io syrup, siramamy misy rano kely io? Mendrika ve ny siramamy invert izay ananako ao amin'ny pantry? Misaotra indray!
Salama Carmen, holazainao amiko ny vokany ho anao. Tena manan-karena amin'ny ronono izy ireo fa afaka manamboatra syrup amin'ny rano sy siramamy kely ianao. Heveriko fa tsy hiasa tsara ny siramamy mivadika, mamy sy matevina loatra. Mirary ny soa indrindra.
Elenaaaa dia tafavoaka ny fahafatesana !!!! ny zanako vavy 3 taona dia nihinana 2 niaraka tamin'ny "nocilla" nefa tsy nibolisatra ary mpihinana ratsy izany ... hoy izy ireo. Nosasako ronono tamin'ny antsasaky ny ronono ary ny iray tamin'ny siropako. Tokony hamita azy ireo amin'ny toerana iray izy ireo, koa nanala ahy vitsivitsy aho mba tsy halaim-panahy. MISAOTRA
tena matsiro miaraka amin'ny nocilla kely dia mampiaiky ny saina
Mamaly an'i agnes
Salama Agnes, heveriko fa io no iray amin'ireo sakafo maivana indrindra, mofo misy ronono miaraka amin'ny nolilla. Oroka.
Fatima gomez dia hoy izy:
Vao nesoriko avy tao anaty lafaoro izy ireo, ny ahy somary maxi hahahahaha amin'ny manaraka dia tsy maintsy hikajiantsika ny habeny tsara kokoa isika. Miarahaba anao amin'ny resipeo ary mahafinaritra be ny bilaogy.
Valiny tamin'i Fatima Gomez
Misaotra betsaka, Fatima! Faly aho fa tianareo izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Salama, manao ahoana ianao? Te hanontany anao aho raha nofenoiko sôkôla izany dia hitovy amin'ny bollicao izany? amin'ny thermo 21 dia mitovy ihany ny fisaorana ………………….
Ahoana no hamenoanao azy amin'ny sôkôla Sandra ????? Ary miala tsiny amin'ny fidirana amin'ny resakao….
Salama Sandra, tianao ve ny mametraka sôkôla iray grama alohan'ny fanaova-mofo? Raha izany, ny marina dia mbola tsy nanandrana aho ary tsy fantatro hoe hanao ahoana ny sôkôla. Rehefa manao ianao dia afaka manandrana iray na roa, hahitana ny fomba fiasan'izy io. Amin'ny 21 dia mitovy ihany. Mirary ny soa indrindra.
Dolors dia hoy izy:
Salama daholo, Androany no nanaovako ny mofo ary ny tena marina dia be fiahiahy izy ireo, napetrako ilay ronono vita amin'ny antsasaky ny marihitra sy marihitra soja, toa novidiana izy ireo ary tsara ny tsirony, rahampitso dia hanandrana ilay nokilla aho.
misaotra tamin'ny resipeo rehetra
Mamaly an'i Dolors
Faly aho fa tianao izy ireo, Dolors!
Satria tsy tiako dibera dia nosoloiko menaka tanamasoandro ary tsara ihany koa izy ireo, anio dia hanandrana hametraka sôkôla vitsivitsy aho hahitako hoe ahoana izany, ... ary ezaho atao kely kokoa hahaha
Salama Fatima, miaraka amina sôkôla sôkôla dia matsiro izy ireo. Faly aho fa tianao izany !. Mirary ny soa indrindra.
Soratako ity fomba fahandro ity, manan-janaka roa aho, izay azo antoka fa tia azy ireo, holazaiko anao ny vokatr'izany.
Vaovao aho, nefa mieritreritra aho fa tsy izany ihany no fomba fahandro hanondro ahy.
Tongasoa, Beatriz!. Manantena aho fa tianao ny resinay, hoy ianao amiko. Mirary ny soa indrindra.
Salama, voalohany, arahaba tsara, tsara daholo ny zava-drehetra. Ny fanontaniana dia raha mametraka ronono semi aho dia mety hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny fomba fahandro.
Salama M. José, miaraka amin'ny ronono semi dia tonga lafatra izy. Lazao amiko hoe ahoana. Mirary ny soa indrindra.
Salama ry zazavavy, manandrana fomba fahandro mitohy aho ary nanjary tena tsara ity iray ity, matsiro izy ireo, tiako be ny zanako vavy, misaotra
Tena faly aho, Ceci!. Mirary ny soa indrindra.
Salama. Mety ho lasa mangatsiaka ve ity koba ity? 2 sy muffins 15 sy XNUMX fotsiny isika toa be dia be amiko.
Misaotra betsaka amin'ny bilaogy. Tena manampy ahy izy io.
Salama Carmen, mieritreritra aho fa azo atao mangatsiaka izany fa tsy afaka manome toky anao aho satria mbola tsy nandefasako azy. Manana zazavavy roa aho ary manidina ireto mofo ireto. Mirary ny soa indrindra.
Mampiaiky! Nofohany ny rantsan-tànany hehe
Rahampitso dia hiezaka ny hanao ny mofomamy sôkôla 3 hoentina any amin'ny barbecue aho.
Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo, miaraka aminao dia azo antoka ny fahombiazana.
Vao nanao ny mofo misy ronono aho ary nahomby, ny vadiko sy ny ray aman-dreniko no nanandrana azy ireo ary tian'izy ireo izany, manantena ny hanana izany ho an'ny tsakitsaky aho. Misaotra betsaka amin'ny recette
Salama Elena! Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny fizarana ny resinao. Manana ny thermomix mandritra ny iray volana aho, ary anao ny resipeo rehetra nataoko. Tsara be daholo. Eto ianao dia miresaka momba ny fametrahana crème cocoa amin'ny mofo sy ny nataonao tamin'ny thermomix. Azonao apetraka ve ilay recette? Ilay teo ihany efa eo, fa tsy hitako.
Misaotra betsaka ary arahabaina ao amin'ny bilaoginao.
Valio i Juani
Salama Juani, avelako ho anao ny rohy misy ny tsiranoka kakaô nataon'i Elena: http://www.thermorecetas.com/2010/11/26/receta-postres-thermomix-crema-de-leche-cacao-avellanas-y-azucar/
Misaotra betsaka Irene !!
Salama!! Novonoiko ny mofo tao anaty lafaoro saingy tsy nitombo avo roa heny ny volavolany…. Novakiako ihany koa fa misy olona manafana ny lafaoro hatramin'ny 50º ary mamela azy mandritra ny fotoana kelikely… ..fa tsy te-hanakorontana aho…. Misaotra anao indray amin'ireo resipeo mahafinaritra ireo !!
Tsy haiko intsony dia hoy izy:
Salama, tsy azoko.
Ataoko amin'ny antsasaky ny vola, farafaharatsiny mandra-pivoako azy. Mampiasa vovon-tsakafo ihany koa aho, nividy tao anaty fanaova-mofo ary nanao 15 gr teo ho eo (ny antsasaky ny nofonosinao avy amin'ny vaovao). Hitako izao fa ny valopy an'ny Cornstarch dia manana 5,5 fotsiny, izay no tokony hapetrako (valopy 1, antsasany).
Ny zava-misy dia mahazo tena akaiky izy ireo ary mafy be. Moa ve vokatry ny masirasira be loatra? satria io ihany no tsy mety ataoko, omena ny habetsahan'ny katsaka. Sa hatao amin'ny antsasaky ny akora?
Mamaly an'i yanose
Amin'ny ankapobeny, ny fanaovana azy amin'ny antsasaky ny akora tsy tokony ho olana. Ka olana misy masirasira angamba izany.
Nojereko ny boaty misy vovo-mofo izay ao an-trano ary 4,6 g ny sachet tsirairay. Izy io dia mpivaro-mofo sy marika Vahiné manokana.
Ny hany azoko atoro anao dia amin'ny manaraka mametraka 5 grama ianao fa tsy intsony ... andao hojerentsika raha tsara vintana isika ary mamaha ny olana!
Hampahafantatra anay foana ianao, sa tsy izany?
Salama, 5 grama fotsiny amin'ny masirasira maina no apetrako (ho an'ny antsasaky ny vola) ary tsara kokoa noho izany.
Na izany aza, mila ataoko fluffier kokoa izy io, amin'izao, sarotra ny mihinana azy ireo irery. Hitady masirasira avy amin'ity Maizena ity aho (ilay vaovao tsy haiko hoe inona izany, efa hitako tao amin'ny Mercadona fa lavitra ny Merca ary manodidina ny Sinoa fotsiny no tsy ananako).
Mahafinaritra ny fisian'izy ireo sy ny tsirony, tsy hiala aho.
Salama, nanao ny fomba fahandro aho fa amin'ny ronono soja (manan-janaka vavy tsy mahazaka ronono aho) ary mafy ety ivelany, tsy haiko raha nandany lafaoro aho. Ary tsy mbola volon'ondry io, maninona no mety ho izy? Navelako tao anaty lafaoro nandritra ny fotoana lava kokoa izy io, satria toa tsy dia tsara loatra ilay izy. Mety ho tsy nitsangana ampy ve? Nanao levados roa aho araka ny lazain'ny resipeo, fa ny tena marina dia tsy ampitomboiko avo roa heny ny habeny. Nisy olona nanao ny resipe-dronono tamin'ny ronono soja ve?
Raha sarotra izany dia heveriko fa satria navela ela tao anaty lafaoro io. Mikasika ny fiakarana, raha navelanao ny fotoana napetraka tao anaty resipeo dia tokony ho ampy fa rehefa misy fisalasalana amin'ny manaraka dia azonao atao ny mamela azy io hitombo kely kokoa.
Tsy tonga mba hanao ny fomba fahandro amin'ny ronono soja aho fa amin'ny andro rehetra andramako izany dia holazaiko anao, okay?
Misaotra nanaraka anay !!
hiakatra dia hoy izy:
Nanandrana ny fomba fahandro aho nanolo ronono soja ho an'ny rononon'omby sy menaka oliva virjiny fanampiny ho an'ny dibera ... ary tena tsara tokoa izy ireo. Mazava ho azy, avelako hiakatra mandritra ny antsasak'adiny ny koba ao anaty vera, alohan'ny hamoronana azy ireo ary, raha vao niforona, adiny roa. Nentiko tao anaty lafaoro nandritra ny 10 minitra izy ireo, tsy misy intsony. Nanao horonana 100 gr avy aho.
Raiso ny fitsapana satria azo antoka fa tian'ny zanakao vavy izy ireo.
Valiny tamin'i Ascen
Eny, ny marina dia manana vera thermomix feno koba aho hanaovana mofo ronono ary hitako fa tena misy ranony. Ka hatsipiko ao anaty rano izy io ary hitady fomba fahandro hafa miaraka amin'ny PROPORTIONS hafa. Misaotra
Salama. Indroa aho no nanao an'io resipeo io satria tian'izy ireo any an-trano, dia mitovy amin'ny fihinanany azy io ho an'ny sakafo maraina misokatra sy toasted ho sakafo kely. Miarahaba anao.
Nanandrana ny fomba fahandro fotsiny aho dia sarotra izy ireo, nataoko tamin'ny endrika mofo ary nilaiko mihoatra ny 15 min satria tsy mandray na mandoko izy ireo… .. inona no tsy nety nataoko ??? Misy torohevitra ve ???
Heveriko fa sarotra tamin'ny fanaovan-mofo lava loatra izy ireo. Amin'ny manaraka dia apetaho amin'ny hafanana ambony kokoa ny lafaoro (hatramin'ny voalohany) ary endaso mandritra ny minitra vitsivitsy.
Salama, afaka mametraka arina varimbazaha ve ianao? Ny alahady izao dia tsy misy misokatra hividianana hery
Afaka mangatsiaka ve izy ireo? Azo atao amin'ny ronono semi sy tsy misy siramamy ve izy ireo?
Eny, rehefa vita dia azonao atao ny mangatsiaka mangatsiaka.
Izy io dia azo atao amin'ny ronono semi-skimmed, eny.
Ary ny momba ny tsy misy siramamy ... tsy hanina toa mofo ronono izany raha mamafa siramamy ... tsy ho ratsy fa ho hafa. Ny torohevitro dia ny hametraka kely kokoa. kely kely 😉
Tsara !!!!! Natolotry ny namana iray aho ary tsy hitsahatra hanao izany aho izao !! ? Misaotra anao!!
Azo atao toy ny mofomamy ve izy ireo, izany hoe manamboatra baolina enina ary apetaho mifanila ambara-pameno ny lasitra mofomamy? Hitako fa vita io saingy tsy fantatro raha afaka manao izany aho
Ampy ho an'ity fomba fahandro ity. Misaotra !!
Salama Elena, androany no nanamboarako ny mofo ronono ary efa nivoaka izy ireo tsara, saingy misy fitaka ve ny hahazoana endrika mahafinaritra? Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=XNUMX ''
Marta B Venturas dia hoy izy:
Izahay dia nanamboatra ny yaourt grika tamin'ny fomba fahandro anao ary tianay izany. Izahay izao dia nitady hampiasa ilay serum sisa tavela, fa tsy fantatray hoe aiza.
Milaza ianao fa azo ampiasaina amin'ny muffins ronono fa ronono ao anaty recette ihany no hitako.
Andao hojerentsika raha afaka manao an'ireny muffin ireny miaraka amin'ilay mpanao hosodoko isika!
Misaotra nizara resipeo tsara toy izany!
Mamaly an'i Marta B Venturas
Salama Marta, misaotra betsaka tamin'ny hevitrao! Azonao atao tsara ny mampiasa dibera ho solon'ny ronono betsaka. Ary ny habetsaky ny tsy ampy anao mandra-pahatonganao ny ronono 250 g ilaina amin'ny fanamboarana ireo mofo dia mameno azy amin'ny ronono ianao. Izany hoe apetrakao ny serum anananao ary fenoy ronono mandra-pahatongany 250g. Misaotra nanaraka anay! 🙂
Capellini miaraka amina salmon misy setroka sy saosy mangamanga
Tuna sy quiche oliva